Indawo ezolileyo kwiPaki yesiXeko - I-Airbnb
Indawo ezolileyo kwiPaki yesiXeko
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSofia
Kwindawo ekhethekileyo uya kufumana intuthuzelo kunye noxolo oludingayo ukuze uzive usekhaya. Ifulethi elikhanyayo elibekwe kwindawo eluhlaza kunye nepholileyo, imizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wesixeko. Ibandakanya amagumbi amabini okulala, enye yazo inesuite, amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela elinebalcony. Ikhitshi ixhotyiswe ngeyona nto ingcono yeendwendwe zethu.
Ilungelo lokujonga elizolileyo lePaki yeSixeko saseGuimarães kunye nokufikelela ngokuthe ngqo ngeenyawo ukuya kwi-ecovia.
Le ndlu ikumgangatho we-4 kunye negumbi lokuhlala elikhulu apho unokutya kwaye uphumle ukubukela i-LCD TV okanye ukonwabele imbonakalo yomhlaba ngefestile/ibhalkhoni. IWifi yasimahla kuyo yonke indlu. Onke amagumbi anokufikelela kwi-balcony enelanga kakhulu. Ikhitshi likhulu kwaye lixhotyiswe nge-hob kunye ne-oveni, imicrowave, ifriji, zonke izitya ezikhoyo, indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba kunye neayini. I-dishwasher kunye ne-detergent yokuhlamba impahla, amashiti, iitawuli, ijeli yokuhlamba kunye nephepha langasese liya kunikwa ngexesha lonke lokuhlala.
Emva kokuhamba kancinci okanye imizuzu emi-2 ngemoto kwaye nangaphambi kokufikelela entliziyweni yesixeko uya kufumana iindawo zokutyela (Casa do Rio, Migas de Pão, ForMigas), Guloso Take Away, iicafes (Vieneza, Dom Chá, Midouro), iimarike ( Talho Pavir), impahla (Vitoria) kunye ATM, phakathi kwabanye.